efa hitanareo izao ny fahantranay sy ny fihazakazaky ny fahapotehan’ny tontolo iainanay. Ianareo anefa ity toa faly mitanisa ireny fahavoazanay ireny fotsiny fa ny vahaolana atolotrareo hatramin’izay ihany no mbola mody hatolotrareo anay eto na dia efa hita izao aza fa tsy mbola nahomby mihitsy. Ny zavatra iray mbola mahalasa ny saiko koa izao dia ny hoe inona no antony mbola hidongianareo hiaraka aminay eto foana rehefa tsy hitondra fihatsarana amin’ny fiainanay akory fa toa vao mainka aza mamendrofendro fotsiny amin’ny fitanisana ireny fahavoazan’ny bandy ireny ? Tena tsofina rano ianareo ry Jean rehefa tsy hanampy anay akory a ! Marina e ! Ny tena mahagaga ahy dia fombanareo mianakavy miray trano ao mihitsy ny manao tahaka io, tsy rainy tsy zanany. Rehefa mba mahavelona anareo rangahy izay zava-misy any aminareo any dia mba avelao mba ho anay amin’izay izay tokony ho anjara masoandronay a !